Famerana ny vidin’entana : Mbola sarotra ny fanaraha-maso -
AccueilSongandinaFamerana ny vidin’entana : Mbola sarotra ny fanaraha-maso
Vaovao ny taona, vaovao ihany koa ny vidin’entana eny an-tsena. Tato anatin’ny herinandro vitsy dia niakatra daholo ny vidin’entana ilaina amin’ny fiainana andavanandro. Tafiditra amin’izany ny vary, ny siramamy, ny hen’omby, ny legioma sy ny maro hafa. Manoloana io fiakarana mihoa-pampana io anefa, dia nilaza ny teny anivon’ny minisiteran’ny Varotra sy ny fanjifana fa mbola sarotra ny fanaraha-maso entina hamerana ny vidin’entana. Raha momba ny vidim-bary izao, dia nanazava ny talen’ny fisorohana ny hosoka sy ny fiarovana ny mpanjifa, (DPFPC), Randrianalisoa Valonirina fa, “tsy mametra ny vidim-bary ny Fitondram-panjakana fa kosa miara-miasa amin’ireo mpandraharaha ara-bary, mpamongady ary mpaninjara mba hitadiavana marimaritra iraisana tsy hampidangana ny vidim-bary nafarana, fa mba ho zakan’ny sarambabem-bahoaka.”
Toraka izany koa ny PPN. Araka ny fanazavana hatrany, dia efa manoro ireo mpaninjara ny toerana misy entana amin’ny vidiny mirary ny tompon’andraikitra, fa ireo mpivarotra no tsy mamonjy izany toerana izany. Fa samy mamonjy izay metimety aminy. Eo indrindra no miteraka olana amin’ny vidin’entana, satria miankina amin’ny toerana hakana entana ny famerana ny vidin’entana, hany ka samy manana ny masonkarenany. Satria raha olona mampiasa fitaterana izao dia ho lafolafo ny handefasany ny entana. Ohatra izao, raha 74 000 Ariary ny vidin’ny vary iray gony miala any Toamasina, ary 4000 Ariary ny sandan’ny fitondrana azy avy any, dia lasa 78 000 Ariary izany rehefa tonga eny Anosibe, izay mbola miampy ny sandan’ny fitondrana izany. Mbola olana ihany koa ny tsy fahampian’ny toerana famatsiana entana, izay eny Isotry sy Anosibe ihany no ahitana izany. Nefa misy olona avy Ambatondrazaka izao, eny Isotry no maka entana madinika. Izay rehetra izay, dia isan’ny mbola mahasarotra ny famerana ny vidin’entana.